Site Administration mamaclub.info (antsoina hoe Site) dia manaja ny zon'ny vahiny amin'ny Site. Manaiky tsy misy fepetra ny maha-zava-dehibe ny tsiambaratelo momba ny mombamomba ny mpitsidika ao amin'ny tranokalanay. Ity pejy ity dia ahitana fampahalalana momba ny vaovao azontsika sy angonina rehefa mampiasa ny Site. Manantena izahay fa hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fampahafantarana manokana omenareo ity fampahalalana ity.
Ity Policies Privacy ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny Site sy ny vaovao nangonina sy tamin'ny alalan'ity tranonkala ity. Tsy mihatra amin'ny tranonkala hafa izany ary tsy mihatra amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo izay ahafahan'ny rohy mankany amin'ny tranonkala.
Rehefa mitsidika ilay tranonkala ianao dia mamaritra ny anaran'ny mpamatsy sy ny firenena, ary koa ireo fiovana voafantina avy amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa (ilay antsoina hoe "fitohanan'ny fifindran'ny fifindrana").
Ny fampahalalana azonay ao amin'ny tranokala dia azo ampiasaina mba hanamora ny fampiasana ny Site, anisan'izany ny:
- fananganana ny tranonkala amin'ny fomba mahazatra indrindra ho an'ireo mpampiasa
Ny tranonkala dia tsy manangona fampahalalana manokana izay omenareo an-tsitrapo rehefa mitsidika na misoratra ao amin'ny Site. Ny teny hoe "fampahalalana manokana" dia ahitana ny fampahalalana izay mamaritra anao ho olona manokana, ohatra, ny anaranao na ny adiresy imailakao. Na dia azonao atao aza ny mijery ny votoatin'ny tranonkala raha tsy mandalo amin'ny fizotry ny fisoratana anarana, mila manisika hampiasa asa sasany, ohatra, mamela ny fanehoanao ny lahatsoratra.
Ny tranonkala dia mampiasa ny teknolojia "cookies" ("cookies") mba hamoronana tatitra momba ny statistika. "Cookies" dia vitsy ny angon-drakitra nalefan'ny tranonkala iray izay mitahiry ny solosaina amin'ny ordinatera amin'ny ordinateranao. Ny "cookies" dia mirakitra fampahalalana izay mety ilaina amin'ny Site - mba hamonjena ireo safidy hijerena ireo safidy ary hanangona vaovao momba ny statistika ao amin'ny Site, i.e. inona ny pejinareo nakarinao, inona no nakarina, ny anaran'ny tambazotran'ny ISP sy ny firenena mpitsidika, ary koa ny adiresy vohikalan'ny antoko fahatelo izay nahitana ny fiovan'ny tranonkala, sy ny sisa. Na izany aza, ny fampahalalam-baovao rehetra dia tsy misy ifandraisany aminao amin'ny maha-olona anao. "Cookies" dia tsy manoratra ny adiresy mailaka sy ny fampahalalana manokana momba anao. Ny teknolojia ao amin'ny Site ihany koa dia mampiasa ireo orinasa mpanamboatra orinasa hafa (Google, Yandex, Facebook, sns.).
Ankoatra izany, mampiasa tranonkala fitantanana tranonkala maromaro izahay hanisa ny isan'ny mpitsidika ary hanombana ny fahaizana ara-teknika ao amin'ny tranokalanay. Mampiasa vaovao ity mba hanapaka hoe ahoana ny olona maro mitsidika ny toerana sy mandamina ny pejy ao amin'ny lalana mety indrindra ho an'ny mpampiasa mba ho azo antoka fa ny Site ny navigateur ampiasaina, ary manao ny afa-po ny pejy araka izay ilaina araka izay azo atao ho an'ny mpitsidika. Manoratra momba ny hetsika ao amin'ny tranokala isika, fa tsy momba ny mpitsidika tsirairay ao amin'ny tranokalam-pifandraisana, ka tsy hisy ny fampahalalana manokana momba anao manokana ho voavonjy na ampiasain'ny Administration Site raha tsy misy ny fanekenao.
Raha hijery ny lahatsoratra tsy misy cookies dia azonao atao ny mametraka ny navigateur amin'ny fomba izay tsy manaiky cookies na mampahafantatra anao ny mandefa azy. Manoro hevitra anao izahay mba hijery ny fizarana "Fanampiana" ary hahafantarana ny fomba fanovana ny tranokala ho an'ny "cookies".
Ny Fitantanan-draharahan'ny tranonkala dia tsy mivarotra na mamela ny mombamomba anao manokana ho an'ny antoko fahatelo. Tsy mamoaka ny mombamomba anao manokana ihany koa izahay, afa-tsy izay omen'ny lalàna.
Ny fitantanana ny vohikala dia manana fiaraha-miasa amin'ny Google, izay mametraka fototra ara-bola amin'ny tranokala fanalahidin'ny tranokala sy ny dokam-barotra (anisan'izany, fa tsy voafetra ho adiresy an-tsoratra). Ao anatin'ity fiaraha-miasa ity, ny Fampahalalàn'ny vohikala dia mampifantoka ny mombamomba ireo olona liana ireto fampahalalana manaraka ireto:
1. Google ampiasain'ny mpamatsy mpiara-miombon'antoka dia mampiasa cookies mba hampisehoana dokambarotra ao amin'ny Site;
2. Ny cookies avy amin'ny vokatra vokarin'ny DoubleClick DART dia ampiasain'i Google amin'ny dokam-barotra aseho ao amin'ny Site ho mpikambana ao amin'ny programa AdSense momba ny votoatiny.
3. ny fampiasana ny Google raki-daza «mofomamy amin'izato lokony» mamela azy io mba hanangona sy hampiasa vaovao momba mpitsidika ny Site (afa-tsy ny anarana, adiresy, mailaka ny adiresy na ny nomeraon-telefaoniny) momba ny fitsidihana ny Site sy ireo vohikala mba hanome dokam-barotra momba ny entana sy ny tolotra.
4. Google amin'ny fizotran'ny fanangonana ity vaovao ity dia tarihin'ny politikany manokana amin'ny tsiambaratelo;
5. Ireo mpampiasa ny tranonkala dia mety mandà ny hampiasana ny DART cookie cookies amin'ny fitsidihana ny politika momba ny fiainana manokana momba ny doka sy ny tambajotran'ny votoaty Google.
Tadidio fa ny famindrana ny mombamomba rehefa mitsidika fahatelo-antoko toerana, anisan'izany ny toerana ny mpiara-miasa orinasa, na dia ny Web toerana misy rohy amin'ny Site na ny Site misy rohy ireo tranonkala, dia tsy ho lavo ao anatin'ny votoatiny rakitra ity. Ny Fitantanana ny Site dia tsy tompon'andraikitra amin'ny hetsika aterineto hafa. Ny fizotry ny fanangonana sy ny famindrana ny mombamomba ny olona rehefa mitsidika ireo tranonkala dia tarihin'ny lahatsoratry ny "Protection of Personal Information" na mitovy, hita ao amin'ny vohikalan'ireo orinasa ireo.
Na izany aza, arakaraka ny tranokala ampiasainao dia misy fomba isan-karazany azo ampiasaina hanakanana cookies. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny rohy manaraka:
Mampifantoka ny sainao amin'ny zava-misy ianao amin'ny fanovàna ny fanalahidin'ny navigateur anao sy ny fandàvanao ny fampiasana sy ny fanavotana cookies amin'ny fitaovanao, dia ho afaka hijery ny Site ianao, na dia misy ny safidy sasantsasany na ny zavatra mety tsy mety aza.